UE Boom 2, adiga ayaan kuu tijaabinaynaa | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Qalabka kale, Reviews
Toddobaadkii hore dhammaadkiisii ​​waxaan ka qayb-galnay soo-bandhigga Midowga Yurub Boom 2. Si tan loo sameeyo, raggii ka yimid Ultimate Ears ayaa na geeyay Andorra halkaas oo buste baraf ah ay ku tuseen faa'iidooyinka qalabkan. Maxay tahay meesha ugu wanaagsan ee lagu muujiyo boodhka iyo u adkaysiga biyaha jiilka cusub ee sameecadaha? Dhalinyaradu!
UE Boom-kii ugu horreeyay wuxuu muujiyay shaqada wanaagsan ee soo-saaraha oo siinaya alaab adag oo tayo leh, sida aad ka arki karto falanqeyn ay sameeyeen asxaabteena ka socota Actualidadgadget. Hadda, ka dib markii aan isku dayay UE Boom 2, waxaan dhihi karaa oo keliya inay ku guuleysteen inay si weyn u hagaajiyaan wax soo saarka, ku guuleysiga si fudud tayada codka.
1 UE Boom 2, ku hadla meel kasta oo la geynayo
2 Tayada codka aan lagaran karin ee kuhadleysa kumbuyuutarrada
UE Boom 2, ku hadla meel kasta oo la geynayo
Dareenka ugu horreeya marka la tijaabinayo UE Boom 2 waa kuwo aad u wanaagsan. in la bilaabo sheyga ayaa umuuqda mid adag marka lagu daro kala bixinta tayada dhamaan dalooladeeda. Daboolka caagga ah ee ku hareeraysan qalabka ayaa runtii ka dhigaysa mid taabasho taabasho leh, ka hortag ah UE Boom 2 Waxay ka siiban doonaan gacmahaaga xitaa markay qoyan yihiin, dhibic maskaxda lagu hayo. Intaa waxaa dheer, qaabkeeda wareegsan wuxuu fududeeyaa qabashada qalabka, in kasta oo miisaankiisu yahay 548 garaam.
Qaybta kore waxaan kaheleynaa xakamaynta iyo joojinta kuwa kuhadlaya, iyo waliba badhan yar oo u adeega Ku waafaji UE Boom 2 qalab kasta oo Bluetooth ah. Furayaasha xakamaynta mugga waxay ku yaalliin afaafka hore ee kuwa ku hadla, taasoo u oggolaanaysa in mugga si dhakhso leh oo fudud loo rogo ama hoos loo dhigo, waxtar badanna leh haddii aan xeebta joogno oo aanan doonaynin inaan ku taabno taleefanka gacmo wasakh ah. Aynu xusuusano in UE Boom 2 ay wada qaadan karto. Ugu dambeyntiina waxaan haysannaa qaybta hoose ee kuwa ku hadla, halkaas oo ay ku yaalliin dekedda micro USB-ka ee lagu dalaco UE Boom 2 iyo wax soo saarka codka ee 3.5 mm.
Gabagabada waa mid aad u cad: UE Boom 2 waxay leeyihiin nashqad weyn oo noo oggolaan doonta, tusaale ahaan, inaan ku dhaweyno buurta baaskiilkeeda, oo noo oggolaaneysa inaan muusikada u qaadno meel kasta. Laakiin maxay ku hadlayaan Dhageystayaasha Dhagaha Dhagaha ee dhawaaqu u eg yihiin? Waxaan horeyba kuugu sheegayaa in dhawaqa si fudud u fiican yahay.
Tayada codka aan lagaran karin ee kuhadleysa kumbuyuutarrada
Si laga bilaabo, awoodda af-hayeenka ee UE Boom 2 ayaa kordhay 25% marka loo eego kii ka horreeyay. Waxaan tijaabinay noocyo muusig oo kala duwan waxqabadka UE Boom 2 wuxuu ahaa mid heer sare ah, oo bixinaya dhawaq hufan oo tayo leh.
Isticmaalka isticmaalka buluugga ah ee isku-dhafan ku hadla UE-da cusub wuxuu gaarayaa 30 mitir. Sida iska cad xogtan ayaa ku habboon meelaha furan laakiin ka dib markii aan ku tijaabinay ku hadlayaasha qolalka kala duwan ee albaabku xiran yahay ma aanan arkin wax dhalanrog ah oo dhawaqa ah.
Riwaayad aad u xiiso badan ayaa la socota xakamaynta dhaqdhaqaaqa; tusaale ahaan marka kor loo qaado UE Boom 2 oo hal gacan la siinayo taabasho fududna baabacada gacanta kale qeybta sare ee afhayeenka waxaan hakineynaa ciyaarta si aan u taabano qeybta kore markale. Iyo laba taabasho oo deg deg ah ayaan ku hormarin doonaa heesta. Si dhakhso leh oo fudud.
Intaa waxaa dheer, ragga ka socda Dhagaha Ultimate waxay abuureen xiiso leh codsi noo oggolaanaya inaan ku xakameyno howlaha kala duwan ee kuwa ku hadla taleefannada gacanta, xakamaynta heerka batteriga ama mugga aaladda, iskudirinta dhowr taleefan oo isku mar ah si midkastaaba u garaaco muusikada aad rabto. Xitaa waxaan ku xiri karnaa dhowr ku hadla ee UE Boom line ama Roll UE si aan u dhagaysanno muusikada muusikada!
Faahfaahin kale oo la yaab leh ayaa la timid iyada Shahaadada IPX7 taas oo u oggolaanaysa UE Boom 2 in lagu quusiyo ilaa 1 mitir qoto dheer 30 daqiiqo. Waxaan tijaabinay iska caabinta aaladda xilliga barafka wax dhibaato ahna ma siinin. Dabcan, biyaha hoostooda ma dhawaaqi doonaan maaddaama calaamadda Bluetooth-ka luntay, in kastoo isla marka aad qalabka ka saarto biyaha, muusiggu mar kale ayuu u ciyaari doonaa dhibaato la'aan.
Waa in laxasuusnaadaa in daboolka daboolaya wax soo saarka UE Boom 2 waa in si adag loo xiraa si aan biyuhu u galin, sida lafilayo, laakiin ilaa iyo intaad faahfaahintaas tixgelinayso, waxaad si fudud ugu qoyn kartaa dadka kula hadla midkoodna xeebta , baraf ama roob la'aan. Sirta? UE Boom 2 ma laha qaybo bir ah.
Batariga UE Boom 2 wuxuu bixiyaa a ismaamul shan iyo toban saacadood ah Haddaynu intaas ku darno in khidmadda oo dhammaystiran ay qaadanayso wax ka badan laba saacadood, way caddahay in kuwa hadlaya ay leeyihiin xadhig dheer. Wax soo saar aad u taxaddar badan oo dhadhan weyn nooga tagay afkeenna. Hadda waa inaan sugno inta unugga tijaabada ahi imanayo si aan u qaadno falanqayn dhammaystiran oo dhammaystiran halka aan ku tusi doonno dhammaan sirta cajiibka ah ee UE Boom 2.
Intii lagu guda jiray soo bandhigida kooxda Ultimate Ears waxay dhowr jeer yiraahdeen in kuwan hadlaya ay ku wajahan yihiin dhagaystayaal da 'yar oo raadinaya inay muusig la tagaan meel kasta. Ka dib markii aan isku dayayna waxaan siiyay taasi inaysan run ahayn. Runtii Kuwani hadlayaasha cajiibka ah waxaa loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu ku raaxeysto heesaha ay jecel yihiin socodka, adigoon ka walwalin xaaladaha cimilada ama dhicitaan shil ah.. Ma jeceshahay isboorti xad-dhaaf ah? UE Boom 2 ayaa ah xulashada ugu fiican. Miyaad dooneysaa qaar ku hadla inay xeebta ula raacaan asxaabtaada ama ay ku raaxeystaan ​​tayadooda dhawaqa hoostooda? Heerka UE Boom waa xalka saxda ah. Ma waxaad rabtaa oo kaliya sameecad qurux badan oo dhawaq leh? UE Boom 2 ayaa ah xalka ugu fiican.
Iyo haddii aan xisaabta ku dareyno in kastoo si rasmi ah Qiimaha 199 euro, hadda Waxaad ku haysataa iibka Amazon qiimaha 129.90 euro, Markii aan arkay faa iidooyinkeeda iyo kartideeda, waxay ila tahay mid ka mid ah hadiyadaha ugu yaabka badan ee Kirismaskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » UE Boom 2, waxaan ku tijaabinay kuwa ugu hadalka fiican wireless-ka suuqa
Waad salaaman tihiin, maxaad salka ku haysaa inaad tidhaahdo iyagu waa kuwa ugu fiican ??? Ma aanan arkin inay haystaan ​​tusaale ahaan APTX codec si kor loogu qaado tayada maqalka Bluetooth ... Waxyaabo muhiim u ah waqtiyadan.
Ku jawaab gruncho09
Waxaan soo iibsaday goor dhaweyd waxaanan ku oogay seddex jeer ugu badnaan waxaanan ugu isticmaalay mug buuxa oo batteriga wuxuu soconayaa hal saac oo kaliya, waxaan kula isticmaalay iPad-kayga oo leh Bluetooth .... 15 saacadood waa been weyn
Waa inaad nacasnimo badan tahay inaad aaminto inay 15 saacadood soconayso ugu badnaan mugga! Caddadka badan ee awoodda batteriga badan ayaa la cunaa !!!
Xiaomi waxay soo bandhigtay smarwatch-keedii ugu horeeyay, ee caruurta